Sun, Jul 22, 2018 | 23:41:51 NST
अधिकमास अर्थात मलमासको बेला विवाहित जोडीहरु सँगै बस्न हुँदैन भन्ने मान्यता भएकाले नयाँ दुलहीहरु माइत जान्छन् । आखिर मलमास के हो त ?
चुनावअघिको घोषणा पूरा भयो : अब प्रतिवद्धताको पालो
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मात्र होइन, नेपाली राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि यो क्षण ऐतिहासिक हो ।
​व्यंग्य — मोदीको बैगुन छोप्न खोज्ने ओलीको पाइजामा
केही दिनदेखि मनमा शान्ति छैन । साथमा राधिका मात्र छिन् । प्रचण्डसँग त कुरा मिलेको छैन नै । देशका युवाहरुसँग पनि कुरा मिल्न छाड्यो ।
(समाचार टिप्पणी) काठमाडौं, वैशाख २९ – दुई दिने नेपाल घुमाईको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चारपटक एकै शैलीको भाषण गरे ।
नेपालको संविधान आफू अनुकुल बनाउन दिएको दबाब, त्यसपछिको नाकाबन्दी र भुुइँचालोपछिको कहरमा भारतको रुखो व्यवहार ! धेरै नेपालीले मोदीलाई दुःख दिने ठालु ठान्ने कारणहरु पर्याप्त छन् । भारतका उनै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशका विशिष्ट पाहुना बनेर नेपाल आउँदैछन् ।
२०६४ साल जेठमा भएको स्वदेश फिर्ती आन्दोलनको शरणार्थी नारा थियो, ‘नेपाल सरकार बिदा देउ, भारत सरकार बाटो देउ, भुटान सरकार माटो देउ’ । तर भारतले उनीहरुलाई बाटो दिएन । तीन दिनसम्म मेची पुलमा छेक्यो र दमन गर्‍यो ।
नपत्याउनेलाई पनि पत्याउनै पर्नेगरी रेलका कुरा सुन्दा कानमा रेलको सिट्ठी लाग्न थालिसक्यो । सिठी धेरै बजेर होला, आजभोलि त कान दुखेर खपिनसक्नु भैसक्यो । धन्न अहिलेसम्म कानमात्रै दुखेको छ । अझै सिन्को नभाँचि रेलको कुरा गरिरहने हो भने दिमाग रन्कन्छ ।
महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर यससम्बन्धी उचित ज्ञान नहुँदा र ध्यान नदिँदा समस्या निम्तिने गर्छ । जसले गर्दा कति महिला शारिरीक रुपमा मात्रै होइन, मानसिक रुपमा पनि पीडा खेपिरहेका छन् । कतिपयले यस बारेमा उचित ज्ञान नपाएर प्रशस्त भ्रम पालेका छन् । पछिल्लो समय हर्माेनजन्य औषधिको प्रयोग गर्ने महिला बढेका छन् ।
भूकम्प गएपछि तपाईँलाई के राम्रो लाग्यो ?
बालबालिका तथा किशोरकिशोरीसँग छलफल चलाउन विभिन्न प्रश्नावलीहरु तयार पारिएका थिए । धेरै प्रश्न त मैले अहिले बिर्सिसकेँ । तर केही प्रश्नहरु अझै याद छन्, जुन प्रश्नबाट आएका जवाफहरुले मलाई सँधै भन्नेगर्छ ‘हरेक नराम्रा घटनाहरुमा पनि केही न केही सकारात्मक कुरा जरुर हुन्छन्’ । ‘तपाईँलाई भूकम्प गएपछि के कुरा राम्रो लाग्यो ?’ कस्तो वाहियात प्रश्न सोधेको तपाईँलाई लाग्न सक्छ ।
यस्ताे छ कान दुख्ने कारण र बच्ने उपाय
संक्रमण कानको प्रमुख समस्या हो । संक्रमण कानका तीनवटै भागमा हुन सक्छ । कानमा कानेगुजी भरीनु, पाक्नु, दुख्नु, कानमा पीप जम्मा हुनु आदि कानको संक्रमणका लक्षण हुन् । कानको सम्पर्क मस्तिष्कसम्म हुने भएकाले कानको कुनै पनि संक्रमणले मस्तिष्कमा असर गर्न सक्छ । कानमा नङ बराबरको एउटा हड्डि हुन्छ त्यो पाक्दै जादा मस्तिष्कमा संक्रमण पुग्यो भने ज्यानै जाने संभावना पनि हुन्छ ।
धुलो र प्रदुषणको बेला आँखालाई कसरी जोगाउने ?
लगातार लामो समय सम्म ल्यापटप, कम्प्युटरमा बस्नै पर्याे भने बेलाबेलामा बाहिर हेर्ने, हरियो वस्तुमा हेर्न गर्नुपर्छ । र आँखालाई आराम पनि दिनु पर्छ साथै एक्सरसाइज गर्नु पर्छ । हरेक दिन आँखालाई तीन–चारपटक धुने गर्नुपर्छ । जसले गर्दा आँखाको सुख्खापन कम हुन्छ ।
पशुपतिमा प्रहरी जवानको हिटलर शैली : तपाईँ जो भए पनि मलाई के मतलब ?
नजिकैबाट मलाई हेरिरहेका एक प्रहरीले हातको इशाराले मलाई बोलाए । उनले मेरो मोबाइल हेर्दै भने खै मरो फोटो आएको भए तुरुन्तै डिलिट गर्नुहोस् । म अचम्ममा परेँ । मैले सोधेँ ‘किन ?’ म आफू पत्रकार भएको परिचय दिएँ । रुखो स्वरमा उनले भने, ‘तपाईँ जो भए पनि मलाई के मतलब ?’
​माझी बस्तीमा नयाँ घर, खुशीको बहारभन्दा दु:खको कहर
छिप्पिंदै गरेको गर्मी र हुरीबतासकाबीच रामेछापको मन्थली नगरपालिका अन्तरगत तामाकोशी तीरमै पर्ने माझी गाउँ पुग्दा स्थानीयबासिन्दालाई घर बनाउने चटारो थियो । तामाकोशीको किनारैकिनार बनाइएको कच्ची बाटोमा ट्याक्टरलाई सिमेन्ट, गिटी र पानी ओसार्न भ्याइनभ्याई थियो ।
आँसु निकाल्नै दिँदैनन्, तपाईंलाई कसले स्याहार गर्छ मदनकृष्ण ?
उनले रुन थाल्दा दर्जनौं क्यामरा उनीतिर तेर्सिए । उनी डाँको छोडेर रोएको क्यामरावालाहरुलाई बिकाउ मसला भयो । पशुपतिमा क्यामरा तेर्साएर बसेका ‘यूट्युबे पत्रकारले मदनकृष्णको आँसु सबैलाई देखाइदिए । मदनकृष्णको आँसु बेचेर केही यूट्युब हिट भए । हुँदाहुँदा ब्रह्मनालमा यशोदाको पार्थिव शरीरलाई राख्ने बेलामा पत्रकारहरुले गरेको व्यवहारलाई कसरी सम्झने ?
एक किसिमले विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजलाई पठाएर सपथग्रहण अघि नै भारतले पुरानो तिक्ततालाई विर्सेर सम्बन्धलाई अगाडि बढाउ भन्ने सन्देश दिएको थियो । नेपालले के भन्छ भने एकले अर्कालाई सम्मान गरौँ । समान व्यवहार गरौँ । सम्बन्धलाई सुमधुर गति त्यो बेलाबाट दिन सकिन्छ । जब एकले अर्काको सम्मान र समान व्यवहार गरिन्छ ।
कसले ध्वस्त पार्‍याे अर्थतन्त्र ?
भरखरै अभ्यास सुरू गरिएको संघीयताले समस्या झन् चर्काउने निश्चित छ । पूर्व तयारी बिना सबै जसो सरकारी उद्योगहरू बन्द हुनु, तर निजी उद्योगहरू खुल्नु नसक्नुको परिणाम आजको चरममा व्यापार घाटा हो । कार्ल मार्क्सले कतै भनेका छन्, ‘अर्थतन्त्र घोडा हो भने राजनीति बग्गी हो ।’ यी दुवैले एक अर्कालाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले एउटाको अध्ययनबिना अर्कोको चिन्तन अधुरो हुन्छ ।
बिहान उठ्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले मोबाइल हेर्ने बानी मेरो पनि छ । त्यसमा पनि फेसबुक र ट्वीटर । बिउँझिएपछि सबै काम छोडेर कहाँ के के भैरहेको छ र के कुरामा चर्चा भैरहेको भनेर हेर्नै पर्छ । त्यसपछि बल्ल साथीसँग कुराकानी सुरु हुन्छ । खासै धेरै च्याटमा व्यस्त त हुने गरेकी छैन, तर पनि आएको म्यासेजको रिप्लाई गरेकै हुन्छु ।
व्यंग्य : ओलीको पालामा ढुक्कसँग माइत र ससुराली पनि बस्न नपाइने !
विरोधीले त भनेकै थिए, कम्युनिष्ट सरकार आए हाँस्न त के रुन पनि पाईंदैन । तर विरोधीका कुरा कसैले सुनेनन् । ड्याम कि ड्याम सूर्य र गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडामा छाप लगाएर कम्युनिष्टलाई चुनाव जिताइदिए । तिनै कम्युनिष्टहरुले मिलेर अहिले सरकार बनाएका छन् । कसैले चाहेर पनि हल्लाउन नसक्ने बलियो सरकार । धेरैभन्दा धेरै अधिकार ओगटेर बसेका प्रधानमन्त्री ।
धन्नै ! स्कुटरवालीको ज्यान गएन !
उनले घाउ देखाइन् । केही बोल्न सकेकी थिइनन् । बोलिहाल्ने र सोधिहाल्ने पक्षमा हामी पनि थिएनौँ । दुर्घटनापछि रोकिएका गाडीलाई प्रहरीले साइडबाट जान भन्यो । एकछिन फोटो खिचेपछि प्रहरीले स्कुटर घिसारेर बाहिर ताने । सडक छेउमा लिएर स्ट्यान्ड लगाए । ठक्कर दिने बस पनि सडक छेउमा गएर रोकियो । अनि बिस्तारै स्कुटर नजिक पुगेकी युवतीलाई प्रहरीले सोधपुछ गर्न थाल्यो ।
मनकामनाको दर्शन : माइक्रोले सातो उडायो
मंगलबार बिहान सबेरै कंलकीको धुलो छिचोल्दै थानकोटतर्फ जाने गाडी बिसौनामा पुग्यौँ । हामी दुई जोडीसँगै दुई काखे बच्चा थिए । यात्रा मनकामना दर्शनको थियो । कंलकी पार गर्न नपाउँदै आफ्नो गाडीमा जाउँ भनेर तान्ने चालक, सहचालकदेखि गाडी मालिक अनि दलालसम्म सबै भेटिए ।कंलकीको माहोल हाम्रा लागि मात्र होइन सबैका लागि सधैँ यस्तै हुन्छ ।
यी हुन् निजी विद्यालय खारेज गर्नैपर्ने १० कारण
अहिले सरकारी र निजी शिक्षाबीच ठूलो खाडल छ । जबसम्म दुई प्रकारको शिक्षा रहन्छ, तबसम्म शिक्षाको गुणस्तर, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, शुल्कमा मनोमानीलगायतका विवाद कायमै हुन्छ । त्यसकारण अब एकै किसिमको विद्यालय बनाउनुपर्छ । दुई किसिमको विद्यालय नेपालमा जरुरत छैन र निजी विद्यालय खारेज गर्नुपर्ने १० कारण छन् ।
के चितवन उद्योग वाणिज्य संघले कर घटाउन ज्ञापनपत्र बुझाएको विषय भरतपुर महानगरपालिकाले गोप्य राख्नु पर्ने विषय हो ? या यसबारे महानगरपालिकाका प्रमुखको धारणा बुझ्न खोज्दा ‘पीत पत्रकारिता’को आरोप लगाउँदै कार्यक्रममा बस्न अनुमति नभएको उर्दी लगाउने पदाधिकारीले आफ्नो पदको मर्यादा नबुझेका हुन् ? सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार र सर्वसाधारणलेसमेत घटनाको निन्दामा औंला चलाइरहेका छन् ।